MACLUUMAADKA IYO EYGA EYDA EE LOO YAQAAN 'WHOODLE DOG' IYO SAWIRO, EYDA QAMADIGA AH / POODLE HYBRID DOGS - EEYAHA
Macluumaadka iyo Eyga eyda ee loo yaqaan 'Whoodle Dog' iyo Sawiro, Eyda Qamadiga ah / Poodle Hybrid Dogs
Jilcado jilicsan oo Qamadi ah Terrier Territory / Poodle Dogs breed Dogs
Angus the Whoodle (sidoo kale loo yaqaan Swheat-n-Poo) oo jira 1 sano jir— 'Angus waa reer Whoodle oo ka soo jeeda Waqooyiga Carolina Whoodles. Isagu waa Wisconsinkeenii labaad, gebi ahaanba waannu nahay qayb, laakiin waxaan u maleyneynaa Whoodles inay yihiin eeyaha ugu fiican. Looma adeegsan taranka. Isagu waa xayawaanka reerkeena. Waxaan gabi ahaanba jecel nahay eeygan, waxaanan u maleyneynaa inuu isagu yahay muunad weyn oo loogu talagalay isku dhafka naqshadeeyahaan. Sawirka aan soo gudbinayo wuxuu jiraa sanad iyo bil.
Wiley ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Terrierka Dahaarka ah ee Dahaarka leh iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Swheat-n-Poo
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Swheat-N-Poo
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Whoodle
Diiwaangeliyaha Taranka Naqshadeeye = Sweatenpoo
Teagan reer Wicil (Qamadi jilicsan oo jilicsan iyo walxo yaryar oo Poodle ah.) - 'Tani waa Teagan, oo qiyaastii 6 bilood jir ah. Wuxuu leeyahay dabeecad hooyadiis Poodle, aad u macaan oo deggan. Waxaa ku caano maashay Diamonddoodles. '
Kani waa yar yar oo reer Wyyo ah oo ay dhaleen Diamonddoodles.
Adult Whoodle (Jilicsan Dahaarka Qamadiga ah ee Qamadiga Terrier / Poodle hybrid), xushmad sawir leh Shirka Buuraha
Samuel cunugga yar ee Wiley ee yar yar oo jira 7 bilood, sawirna waxaa iska leh Summit Mountain
Dixon kii Yaryaraa ee Wiiq 1 jir
Pixie, Ey yar oo reer Wiley ah waa midab dhuxul-cirro dhif ah. Lahaanshaha sawirka Mountain Summit
Brodie reer Walad 5 jir ah
Maggie 7 toddobaad
Isku darka qamadi / Poodle oo loogu magac daray Marley
Wheaten / Poodle mix (Whoodle) oo loogu magac daray Marley
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan reer Wiley
Sawirada Whoodle Bogga 1
Liiska eeyaha Dahaarka ah ee loo yaqaan 'Soft Coated Wheaten Terrier Mix breeds Dogs'
adhijirka yar yar ee australia casaanka ah midabka saddexda ah
collie xadka muqisho eey buurta bernese
sawirrada eeyaha waaweyn ee Switzerland
feeryahan isku qas qasbo
dahabiga dahabka ah ee isku dhafka eyda buurta bernese